Nin dadkiisa hoog biday oo welina ay jecel yihiin | Hangool News
Nin dadkiisa hoog biday oo welina ay jecel yihiin
Keligii-taliyihii Soviet-ka Joseph Stalin ayaa silic baday dadkiisa, balse markii ugu horreysay daraasad la sameeyay ayaa lagu ogaaday in inta badan dadka Ruushka u dhashay ay ninkan jecel yihiin.
Xarunta Levada Center ayaa bishii March cod ka qaadday dad Ruushka u dhashya oo da`dooda ay ka weyn tahay 18, kuna kala sugan 137 magaalo. Natiijada ayaana sidan noqotay: 51% way qaddariyaan, way jecel yihiin amaba way ka helaan Stalin.
Sanadihii 1930-meeyadii, dhibaatooyinkii hanti-wadaagga Stalin ayaa hareeyay USSR, isagoo malaayiin qof u diray xeryo dadka lagu xamaasho amaba kooxo u idman inay xabbado ku furaan.
Balse guushii Soviet-ku ay ka guuleysteen Nazi-gii Jarmalka ayaa loo arkaa wax lagu faano.
Codbixinta Levada ayaa noqotay mid codadkii ugu badnaa loo qaado Stalin 20-kii sano ee la soo dhaafay, muddadaas oo xusuusta ninkan ay dib uga soo laba kacleysay Ruushka. Taallooyinka cusub oo Stalin loo dhisay ayaa goobo badan oo dalkaasi ka tirsan laga taagay.
Mid ka mid ah wargeysyada Ruushka oo warbixin ka qoray arrintaasi ayaa cinwaan uga dhigay: “Stalin Xiddi Sare”.
Waxaad dukaamada Ruushka ka heleysaa waraaqaha derbiyada lagu xardho iyo waxyaabo kale oo uu Stalin ku sawiran yahay.
Maxay tahay sababta loo jecel yahay nin geystay dhibaatooyin badan?
Saynisyahan siyaasadeed Yekaterina Shulman ayaa ku sababeysay saddex arrimood.
Waqtiga oo laga soo gudbay: “Dhacdooyinkaasi way fogaayeen,” ayay BBC-da u sheegtay.
Buunbuuninta ay dowladda u sameysay: Ms Shulman ayaa tiri “yeynaan iska indho tirin xaqiiqda ah in Stalin loo aqoonsaday guushii dagaalka iyo hoggaamiyihii caqliga badnaa. Iyo in xilligii Soviet-ka loo arko xilligii ugu wanaagsanaa”.
Dareenka ah ka hor imaanshaha hoggaanka: “Tani waa qaybta ugu xiisaha badan,” ayay tiri Ms Shulman. “Taallada Stalin ma aha isaga oo sax ah, balse waxaan xusuusta ka tirmeyn – waxaa loo arkaa inuu calaamad u yahay edbinta iyo inuu dagaal la galay saraakii dhuuni-raac ah, oo maamul walba la loollamaya.”
Image captionStalin (safka ugu horreeya, midig) ayaa Yalta ku martigeliyay saaxiibbadiisa dagaalka ee Churchill iyo Roosevelt horraantii 1945
Aragtida Raashiyaanku ee ku wajahan Stalin ayaa is beddeleysay tobnaankii sano ee la soo dhaafay.
Markii uu noolaa waxaa caabudi jiray malaayiin qof oo ka soo jeeday Soviet-ka, halka ced walboo Soviet-ka ka hortimaadda loo arkayay shisheeye-kalkaal iyo mucaarad.
Sanadkii 1956, kaddib dhimashadii Stalin, xaalad xasarad ah ayaa la galay: hoggaamiyihii hanti-wadaagga Nikita Khrushchev ayaa shakhsiyadda Stalin ku sheegay mid ku dhisneyd amar ku taagleyn iyo keligii-talisnimo, mar uu khudbad sir ah ka jeediyay sanadguuradii 20-aad ee Xisbiga. Taasi waxay horseedday dabacsanaan aan cago ku taagneyn oo dhanka siyaasadda ah, iyadoo kumannaan maxaabiis laga sii daayay xerooyinkii shaqaalaha ee Stalin.
Balse tobnaankii sano ee ka dambeeyay xukuumadihii Soviet-ka ayaa daah saaray xaddiga dhabta ah ee ay la ekaayeen dembiyadii Stalin.
Alexander Solzhenitsyn oo mucaarad ahaa ayaa wax ka sheegay taliskii qaraaraa, isagoo ku jiray xeryaha Gulag ee Stalin, arrintaas ayaana loo dhibaateeyay.
Image captionMadaxweyne Putin ayaa marar badan dadkiisa xusuusiya geesiyaashii dagaalka ee dalkaas
‘Geesi’ soo cusbooneysiintii Stalin
Raashiyaan badan ayaa la yaabay markii ay ogaadeen wixii dhacay dabayaaqadii 1980-meeyadii, markii hoggaamiyihii hore ee Soviet-ka Mikhail Gorbachev uu daaha ka rogay taliskii Stalin, isagoo adeegsanaya siyaasaddiisa furan.
Taliskii Stalin ayaa mahadhooyin ku reebay Bariga Yurub, iyadoo dad badan ay weli ku eedeeyaan dhibaatooyinkii dhacay xilligii hantiwadaagga.
Sida laga soo xigtay daraasadda Levada, horraantii sanadihii 2000 fakradaha dadka Ruushka way kala duwanaayeen, iyadoo qaarna ay taageerayaan kuwo kalena ay ka soo horjeedaan.
Balse intii u dhaxaysay 2008-2014 inta badan dadka codka dhiibtay fakrad dhexdhexaad ah ayay ka haysteen Stalin.
Balse tan iyo 2015, tirada dadka jecel ninkan oo da` walba isugu jirta ayaa si aad ah u korortay.